I-china Thrust Ball Bearing abakhiqizi nabaphakeli | I-LGGB
I-Thrust ball bearings ikhiqizwa njengesiqondiso esisodwa noma i-double direction thrust ball bearings. Zenzelwe ukuhlalisa imithwalo ye-axial kuphela futhi akumele ithwaliswe noma yimuphi umthwalo osabalalayo.
Amabombo we-Thrust ball ahlukaniseka, i-shaft washer, i-washer yezindlu, ama-ball ne-cage assembly (s) angafakwa ngokuhlukile. Ama-washer we-shaft anebhola lomhlabathi ukuze kuvunyelwe ukuphazamiseka okulungile. I-bore ye-washer yezindlu iyaguqulwa futhi ihlale inkulu kune-shaft washer bore.
Ukuqondiswa okukodwa kokufakwa kwebhola: kuqukethe ama-washer amabili anama-raceways namabhola aqondiswe nge-ba cage. Ama-washer anezindawo zokuhlala ezicabalele, yingakho kumele asekwe ukuze wonke amabhola alayishwe ngokulinganayo. Amabhere athwala umthwalo we-axial kuphela ohlangothini olulodwa. Abakwazi ukuthwala amabutho e-radial.
Ukuqondiswa okuphindwe kabili kokufakwa kwebhola: ube namakheji amabili anamabhola phakathi kwe-shaft washer emaphakathi kanye nama-washer amabili we-houding anendawo yokuhlala eyisicaba. I-shaft washer inemigwaqo yomjaho ezinhlangothini zombili futhi iqondiswe kumagazini. Bearings bayakwazi ukuthwala amabutho axial kuphela kuzo zombili izinkomba.
Langaphambilini Bamba Khipha Amabombo